I-PGA Tournaments, iMbali, Abadlali kunye neNyaniso
Ulwazi malunga nePGA Tour
I-PGA Tour, esekelwe eFlorida kunye neendwendwe kulo lonke elaseUnited States, kunye nePuerto Rico, eCanada naseMexico, ithathwa njengotyelelo lwegalufa lomsebenzi wegolisa ehlabathini jikelele. Ngaphandle kweMntla Melika, idla ngokubizwa ngokuba yi-USPGA Tour, okanye i-US PGA Tour, ukuyihlula kwi-Tour ye-Europe kunye nezinye ihotele.
Ngezantsi zikhona izixhobo kwi-About.com ephathelene nePGA Tour. Cofa ngesihloko onomdla ekufumaneni ulwazi oluyidingayo.
IShedyuli yoTyelelo lwePGA
Inkqubo yohambo lwe-PGA ye-2015-2016 igqiba kwi-Tour Championship kunye nokunikezelwa kweText Cup ye-FedEx Cup. Kevin C. Cox / Getty Izithombe
Ixesha lephi i-PGA Tour yokudlala? Nantsi ishedyuli yeethamnethi ezizayo kwibalaseli yegalufa yegulane ephezulu. Kaninzi "
IiRekodi zeTek Tour
UJack Nicklaus ubambe iirekhodi ezimbalwa zePGA Tour. Steve Powell / Getty Izithombe
Ufuna ukwazi ukuba yiyiphi igalagi eyithumele amanqaku aphantsi kwi-PGA Tour ? Ngubani ophumelele kwiintambo? Ngubani owafuna iimbalwa ezimbalwa ezibeka phezu kwezimbobo ezingama-72, izimbobo ezili-18 okanye izimbobo ezithoba? Uya kufumana ezi ngxelo kunye nezinye ezininzi apha. Kaninzi "
AbaGoli bePGA Tour
Eli phepha linikeza iingxelo zabadlali begolisa abadumileyo kwimbali yomdlalo. Ezinye ze-career yazo zangaphambi komhla we-PGA Tour, kunye nabanye badlala kakhulu kwezinye iindwendwe emhlabeni jikelele. Kodwa ezininzi zazo zaziyiinkwenkwezi ze-PGA Tour. Uyakwazi ukufunda iprofayili nganye equka isishwankathelo somsebenzi wabo, kunye nokufumana ezinye iinkcukacha zobuqu kunye namaqiniso anomdla. Kaninzi "
UDavid Cannon / Getty Images
Ubuncoma bobukhulu bamadoda buyingxenye yesikhewu sobume be-PGA yoTyelelo, nangona akukho namnye kubo oqhutywa yiPGA Tour. Kule khasi uza kukwazi ukukhetha eyona nto inomdla ekufundeni okungakumbi malunga: i-Masters, i-US Open, i- British Open okanye i- PGA Championship . Kaninzi "
I-PGA Tour Career Winners
Ifoto nguJohn Brown
Yiyiphi iigalufu ezona ziphumeleleyo kwi-PGA Tour? Ngoobani bonke abagadi begalufu abanamaqonga angaphezulu kwama-20? Ziziphi iinkokeli ezisebenzayo eziphumeleleyo? Hlola uludwe. Kaninzi "
I-PGA Tour Player ye-Win Winners
UTom Watson ngo-1982 eBritish Open, eyayinqoba enye yeZintlanu zeNtshontsho zokuVala. Bob Martin / Getty Izithombe
Ziziphi iigalufu eziye zabizwa ngokuba nguMdlali wonyaka kwi-PGA Tour? Nolu uluhlu lwabaphumeleleyo bala mabhaso. Kaninzi "
Ukufaneleka kwePGA Tour: Indlela yokuba ilungu leTyelelo
Ngoko, ufuna ukuba ilungu lePGA Tour. Kodwa ungakwenza njani? Inyathelo 1: Yiba ngenye yegolfu ehamba phambili kwihlabathi. Emva koko, kukho iindlela ezimbalwa zokufumana ubulungu be-PGA Tour, kwaye akukho nanye kubo kulula. Kaninzi "
I-PGA Tour inayo kwaye isebenze kwiWeb.com yeTransnet (eyayiye iNtetho yeSizwe lonke), ityelelo lokuphuhlisa abadlali begolfu abazama ukudlala indlela yabo kwiPGA Tour. Le nkcazo yeWeb.com Tour inikeza iinkcukacha ezingaphezulu, kunye neembali ezininzi kunye neentlanzi. Kaninzi "
KwiWeb.com Tour Finals
Ukususela ngo-2013, i-Web.com Tour Finals ithatha indawo ye-PGA Tour Q-School njengendlela ebalulekileyo yobulungu be-PGA Tour. Le primer kwi-Finals ichaza ukuba ubani odlala kunye nendlela abagadi begalufu abavela ngayo kwiiFomals ukuze bafumane amakhadi e-PGA Tour.
Idibeneyo: Ukukhushulwa kweMfazwe ngaphezulu »
Yintoni uMvulo ukufaneleka?
Abanye abagadi begolfu bahamba kwinkqubo eyaziwa ngokuthi "uMvulo ufanelekile" ukufumana indawo enkundleni yezemidlalo. Nantsi ingcaciso yeli gama, kwaye le FAQ iquka ukujonga kwindlela yokusebenzisa i-PGA Tour ngoMgqibelo. Kaninzi "
I-PGA Tour Cut
Nguwuphi umgaqo osikiweyo kwi-PGA Tour? Nantsi ingcaciso yokuba bangaphi abagadi begalufu abaye banqunyulwa kwiziganeko zetyelelo. Kaninzi "
I-PGA Tour Iphule imiyalelo neMidlalo
Yintoni umgaqo-nkqubo wePGA Tour malunga nokuhamba komdlalo? Kwaye ukuba iqela okanye umdlali unetyala lokudlala ngokukhawuleza, ngaba kukho naziphi na izigwebo? Le FAQ iphendula loo mibuzo. Kaninzi "
Le FAQ iya kwindlela yokutyelela iindwendwe ezininzi zokunikezela "ukuxolelwa kwezixhasi." Ithetha ntoni le nto? Ingcaciso apha, kunye nomgaqo-nkqubo wePGA Tour. Kaninzi "
Umsebenzi wegalufa wehlabathi? Ungayifumana phi i rankings? Ngubani owenza izigwebo? Le mibuzo kunye nabanye baphendulwa apha. Kaninzi "
Amanqaku angaphezulu e-PGA Tour, Honours
UScott Halleran / Getty Izithombe
Le nxu lumene nawe kwi-Almanac yethu yeGalati, apho uya kuba nakho ukujonga iinkokheli zemali ze-PGA ze-Tour, iinkokeli zenkqubela kunye neenkokeli zokubala, Abadlali beNyaka kunye neeRokie kunye noMnyaka, nangaphezulu, kunye nolwazi olufanayo kwezinye ihotele . Kaninzi "
ICharles Schwab Cup yixesha elide elijongene neesekethe eziphezulu ze-PGA Tour, i-Tour Tour. Jonga uluhlu lwabaphumeleleyo kunye neenkcukacha malunga nendlela abavakalisi begolati abaphezulu abafumana ngayo amaphuzu kunye noko bawinelayo. Kaninzi "
AbaPhezulu abakhulu kunazo zonke abaGoli bexesha lonke
Nantsi indawo ye-About.com yexesha elihle elifanelekileyo: i-golfers enkulu kunazo zonke zize zidlale umdlalo. Kaninzi "
Njengobuncoma bobukhulu, iMidlalo yeFlabathi yeGalati ithathwa njengenxalenye yenkqubo ye-PGA yoTyelelo olusemthethweni, nangona ilawulwa yi-International Federation ye-PGA Tours. Iintlanganiso ezintathu ze-WGC kwi-PGA yexesha lokutyelela i-Championship Play Match Play Championship, i-CA Championship kunye ne-Bridgestone Invitational. Kaninzi "
I-PGA Tour Q-School
Fumana uluhlu lwabaxumi be-PGA Tour Q-School, kunye nembali kunye nolwazi oluthe xaxa malunga neentambo ezifanelekayo. Kaninzi "
Iingxelo zeNdebe yeFeEx kunye neePlaffs
Ukujonga ngokubanzi indlela i-FedEx Cup ibonisa ngayo iinkqubo kunye neenkqubo ze-playoffs ngexesha le-PGA Tour season. Kaninzi "
1913 I-US Vula: Ukunqoba okungaze kwenzeke ku-Ouimet kutshabalalisa ukukhula kwe-Golf yase-US
I-World Golf Championships (WGC)
Ngowe-1982 i-British Open: UClampett uya kwiPot, uWatson uzuza i-4 yakhe
Ngubani owayengumdlali onguMgqibelo weBritish Open Open Tournament?
Ngo-1991 iBritish Ivulekile: Ian Baker-Finch's Major
Ngowe-1937 I-Ryder Cup: I-First Road Win (okanye iLife Loss)
I-Masters FAQ: Ukumba kwiiNkcukacha ezinkulu
Ingxelo ephawulekayo yakwaBen Hogan kwi-US Open Tournament
10 Abadlali abahamba phambili kwiGolfers abangakhange bahlaziye iMaster Tournament
Ukuqonda iMicrobial Evolution
Yintoni i-Synesthesia? Inkcazo kunye neNdidi
I-Atlanta Falcons Hall ye-Famers
I-Office Space Quotes
I-Real IRA - Isikhokelo kwi-Real Republican Army Army
I-Biography kunye neProfayili yeJet Li
Yonke Into Okufuneka Uyazi Ngayo I-Bell's Theorem
UJosephine Cochran kunye neNtshutshiso yeDishwasher
Isisombululo esingathathi hlangothi Inkcazo
Ukukhusela i-Bike Cleats yakho - Ngaba kufuneka uyisebenzise?
Biography uJanet Emerson Bashen
I-Patty Duke ifile kwi-69
Funda ngakumbi malunga neeMpawu ezineNtsingiselo kwiNkwenkwezi
Imisebenzi ye-MBA Grads
I-Hendrix College Admissions
I-Merle Haggard ebalulekileyo
Iifilimu ezi-14 eziphambili zeSpanish
Iingoma eziphezulu zeR & B / Soul zika-2009
Indlela yokudibanisa iLwimi elithi "Apercevoir" (ukujonga)
I-SAT yesiFundo soVavanyo lwesiGaba saseFrench
Indlela yokukhetha ikholeji yakho enkulu